Amayeza amaTshayina, i-Herbal Extract, i-Herbal Tea-iDrotrong
Imeyile: info@drotrong.com 0
20 Million+ Isiseko seekhilomitha ezingama-20 zokutyala
25 + Amava angama-25 + oshishino
8000+ Umzi-mveliso wama-80,000
2000 + Isiphumo sonyaka seetoni ezingama-20,000
Ukususela ngo-1995I-Drotrong Chinese Herb Biotech Co., Ltd. ibandakanyeka ekwakheni ishishini elipheleleyo lamayeza amaTshayina, kubandakanya izityalo zaseTshayina izithole, ukutyala, ukuqhubekeka okuphambili, ukuqhubekeka okunzulu, ukukhutshwa kwamayeza kunye nokuthengisa.
Ngophuhliso lwenkampani yethu, simisele isiseko sokutyala kunye nesiseko semveliso yamayeza amaTshayina. Kwisiseko sokutyala, sine-Epimedium, Cortex Phellodendri, Polygonatum Sibiricum, Saussurea Costus njalo njalo, egubungela ngaphezulu kwe-20 yezigidi zeemitha zesikwere. Kwesiseko semveliso, sineefektri ezimbini zokuqhubekeka phambili kunye nomzi-mveliso omnye wokutsala amakhambi ongaphezulu kwe-60,000 yezikwere. Siceba ukwakha umzi mveliso omtsha wokukhupha amayeza kunye nemveliso yezempilo ngaphakathi kweminyaka emithathu.
Isiseko sokutyala kunye nefektri
I-20 yezigidi zeSikwere sokulinganisa ukuTyala kunye ne-80,000 ㎡ mveliso
Amayeza amaTshayina ngaphezulu >>
Ingcambu yeHerbal ngaphezulu >>
Iti yeHerbal ngaphezulu >>
Iimveliso zonyango ngaphezulu >>
Iimveliso zoKhathalelo lwezeMpilo
Kule mihla, abantu banikela ingqalelo enkulu kwimpilo yabo, yiyo loo nto iimveliso zononophelo lwempilo zithandwa ngabantu.I-Drotrong ibonelela ngemifuno esemgangathweni kunye nokukhutshelwa njengezinto ezingafunekiyo kwiimveliso zonyango. Izinto zethu eziluhlaza zikhuselekile, zendalo ngexabiso elifanelekileyo.
Ivenkile kunye neVenkile yeziyobisi
Amayeza emveli amaTshayina (TCM) luhlobo lonyango olwaqala kumawaka eminyaka eyadlulayo e-China. Ihlala ibizwa ngokuba yi "TCM," kwaye iingcali zisebenzisa imifuno ukuthintela okanye ukunyanga iingxaki zempilo. Drotrong Amayeza amaTshayina asetyenziswa ngokubanzi esibhedlele nakwivenkile yeziyobisi, i-100% yendalo ngaphandle kongcoliseko, lolona khetho lufanelekileyo kwintengiso yakho ngexabiso elithe ngqo kumzi-mveliso.
Ukusetyenziswa kwesongezelelo sesondlo semifuno kuya kubaluleka kwimveliso yezilwanyana ngenxa yokuthintela ukusetyenziswa kwezibulala-ntsholongwane ezithile, iziphumo eziyintsalela eziyingozi kunye nokusebenza kwendleko. IDrotrong inemifuno emininzi kwaye isicatshulwa enokusetyenziselwa izongezo zokutya zemifuno.
Uninzi lweefektri zamayeza zamkela amayeza amaTshayina okanye isicatshulwa semifuno njengezinto zawo ezingafunekiyo. IDrotrong inesiseko sokutyala, umzi mveliso wokulungisa amakhambi kunye nomzi mveliso we-extrat we-herbal. Ukusuka kwimpahla eluhlaza yemveliso ukukhutshwa kwe-herbal, sinokukubonelela ngenkonzo ye-OEM enokugcina ixesha kunye nemali yakho.
Ngoku ukuba imarike yobuhle ikhukhumele zizithambiso zemifuno. Abantu bakhetha izinto zokuthambisa zemithi kuba zikhuselekile, zilungile kuzo zonke iintlobo zolusu kwaye zikhululekile kwiziphumo ebezingalindelekanga. Drotrong Amayeza amaTshayina kunye nokukhupha kunokusetyenziswa kushishino lwezithambiso zemifuno.
Iisampuli zasimahla zakho
Ungajonga umgangatho wethu ngeesampulu
Cofa ukufumana iisampulu
Herlu granule workshop waqalisa pro pro ...
Umasifundisane wenkampani yethu wegranule waqala imveliso yokuvavanywa, oko kuthetha ukuba i-Astragalus, forsythia, bupleurum kunye nezinye izinto zokwenyani zonyango ziya kuqhutywa zibe ziingcezu zemifuno kunye negranules yefomula kulayini wethu wokuvelisa kwixa elizayo, kwaye ...
IMaca yinzalelwane yeentaba zeAndes eMzantsi Melika ezinokuphakama kweemitha ezingama-3500-4500. Isasazwa ikakhulu kwindawo yePuno kwindalo esembindini wePeru nakwisixeko sasePuno kuMazantsi mpuma ePeru. Sisityalo sodidi lweLepidium meyenii eCruciferae. Okwangoku, enkulu ...
Ubisi lweoli yenkunkuma
Ioli ye-thistle yobisi luhlobo lweoyile yezempilo enokutyiwa eyenziwe ngeoyile yembewu yobisi. Inexabiso lesondlo eliphezulu. Esona sithako seoyile ye-thistle yobisi yi-asidi ye-fatty engafakwanga, nebaluleke kakhulu kwi-asidi ye-fatty, okt i-linoleic acid (Umxholo we-45%). Ubisi ...
Idilesi: NO.88 South Garden Road, Isithili saseGaoxin, eChengdu, China
Bhalisa ukuze ufumane iindaba kunye neziganeko zamva nje (ukunyusa, iimveliso ezintsha njl.
Ngenisa i-imeyile yakho